Epsilon Organic Oiri Maorivhi - Dhizaini magazini
Organic Oiri Maorivhi
Chishanu 17 Gunyana 2021
Organic Oiri Maorivhi Iyo Epsilon maorivhi maorivhi ishoma edition chigadzirwa kubva kumanyowa maorivhi maorivhi. Iyo nzira yekugadzira yese inoitwa nemaoko, uchishandisa nzira dzechinyakare uye iyo oiri yemuorivhi inonamira mumvura. Isu takarongedza paki iyi tichida kuve nechokwadi chekuti zvinhu zvinoshatisa zvezvigadzirwa zvine hutano zvakanyanya zvinogamuchirwa nemutengi kubva kumhunga pasina chero shanduko. Isu tinoshandisa bhodhoro Quadrotta rakadzivirirwa nemuputuru, rakasungirwa nehwehwe uye rakaiswa mubhokisi remapuranga rakagadzirwa nemaoko, rakaiswa chisimbiso ne wax. Saka vatengi vanoziva kuti chigadzirwa chakasvika zvakananga kubva kugayo pasina kupindira.
Zita rechirongwa : Epsilon, Vagadziri zita : George Gouvianakis, Izita remutengi : Geronymakis George, Organic Farmer/Producer.
Chitatu 15 Gunyana 2021
Organic Oiri Maorivhi George Gouvianakis Epsilon